I-Romania Prefers I-Brands yeTurkey yeNkqubo yoLoliwe | RayHaber
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraI-Romania Prefers Iimpawu zeTurkey zeTrakhi yeTurkey
22 / 11 / 2019 06 Ankara, 16 Bursa, 40 Romania, Ummandla waseMntla Anatolia, zaseYurophu, THE WORLD, railway, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY, tram
I-romania turk ithanda uhlobo lwendlela kaloliwe
Emva kweebhasi zalapha ekhaya ezisandula ukuthunyelwa eRomania, iinkampani zaseTurkey ngoku ziye zaqala ukuthunyelwa kwezinye iimoto zendlela yoololiwe eRomania. Durmazlar ve Bozankaya Kufunyenwe ii-odolo ezinkulu zenkqubo kaloliwe eRomania. Sinikezela ngaphezulu kweetram ze130 eBucharest, Laşi naseTimişoara. Eli nani liphindwe kabini inani lezithuthi ebezi-odolwe ngaphambili ziidolophu zaseRomania kwiinkampani zaseYurophu.
DurmazlarIphumelele ithenda enkulu eRomania. Inkampani yaseTurkey iphumelele ugqatso kunye neCRRCC (China) kunye neAstra Vagoane Călători (Romania). Ngenxa yoko, Durmazlar I-100 izakubonelela ngeetram zomgangatho ophantsi kwikomkhulu iBucharest. Ixabiso lesivumelwano lingaphezulu kwe-180 yezigidi zeerandi.
Omnye umenzi wetram waseTurkey Bozankaya Iza kuvelisa i-16 i-tram entsha kumgangatho we-Iaşi. Ngale thenda, BozankayaNgaphandle kwePesa, umakhi odumileyo wezithuthi zikaloliwe wasePoland. Ixabiso lethenda limalunga ne-30 yezigidi ze-euro. lo Bozankayayayiyithenda yesibini eRomania.
Bozankaya wayewayalele i-16 tram ukusuka kwesinye isixeko saseRomania, iTimişoara, kwaye washiya iPesa yasePoland ngasemva. Ifandesi ikwabandakanya ukhetho olongezelelekileyo lwe-24. Ngokokucaciswa, iitram ziyaqhuba kwiindlela ezingezombane kumgama ongaphezulu kweekhilomitha ze-60. Bozankaya 33 million-Euro exchange eTurkey nale projekthi iza kunika igalelo. Ngokusetyenziswa kwe-24 ukhetho olongezelelweyo kwisivumelwano, ukuthengisa konke kuya kudlula kwi-80 yezigidi zeerandi.
Xa sisenza uhambo lokuya eRomania kunye noKhenketho, siza kuthatha iibhasi zaseTurkey kunye nezithuthi zoololiwe. Ngamana oomasipala baseTurkey.
Bozankaya ve Durmazlar Ndingathanda ukuvuyisana nenkampani yethu kwaye ndinqwenele ukuba baqhubeke nokuthengisa ngempumelelo kwabo bathumela ngaphandle.
Iimpawu zaseTurkey sicinga ukuba zangaphandle
Amacandelo emva kwemveliso yehlabathi
Oomatshini benetekhnoloji yakutshanje ekuveliseni iinqwelo zokuhambisa…
I-Turkish Navy ihlangene neSizwe soTurkey
U-Albayrak, uMongameli we-Türk Ulasim-Sen, uthe, Türk Honour Turk…
Iinkampani ezintathu zaseTurkey eziya kwiThenda yeAlmaty Light.
Ishishini laseTurkey 5 -10 Million Euro yokukhuphela ...
Iinkampani zaseTurkey Zifumana Uloliwe kwiNtengiso yeHlabathi…
I-Otokar izuza iTender enkulu kwi-400 Bus eRomania
I-Romania 40 Umqhawulo woMbane I-Array Set Array Set
Bursalı Durmazlar Ukwakha iTram eRomania